Toromarika Fivoriana Andavanandro
HAMAKY AMIN'NY TENY Abkazianina Acholi Afrikaans Ahanta Aja Albaney Alemà Altaï Alur Amharique Anglisy Arabo Armenianina Asamey Ateso Attié Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Basque Bassa (Cameroun) Batak (Toba) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Boulou Bété Cakchiquel Andrefana Catalan Cebuano Changana (Mozambika) Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chokwe Chol Chopi Chuabo Cinamwanga Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Douala Efik Espaniola Failandey Fante Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frafra Frantsay Ga Galicienne Garifuna Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kabiyè Kabuverdianu Kachin Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kiluba Kimbundu Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji Kwangali Kwanyama Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Lolo Lomwe Luganda Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Manyawa Marathe Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Miskito Mixe (Afovoany) Mixtèque (Guerrero) Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Puebla Avaratra) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Norvezianina Nsenga (Zambia) Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Odia Okpé Oromo Ossète Otetela Otomi (Lohasaha Mezquital) Ourdou Ouzbek Ouïgour (Sirilika) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quiché Rarotonga Romanianina Ronga Rosianina Rômania (Serbia) Samoanina Sango Sena Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tandroy Tankarana Tarasque Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tongan Totonac Tseky Tshwa Tsonga Twi Tzotzil Télougou Urhobo Uruund Valencienne Venda Vezo Vietnamianina Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yacouba Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Édo Éwé
Toromarika Mahakasika ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika Kristianina sy ny Fanompoana
Fitsidihan’ny Mpiandraikitra ny Faritra
Mpiandraikitra ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana
Mpitari-draharahan’ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana
Mpanome Torohevitra Mpanampy
1. Atao araka izay voalazan’ny Tari-dalana ho An’ny Fiainantsika sy ny Fanompoana sy ny toromarika omena ato ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana. Tokony hasaina ny mpitory rehetra mba ho vonona hanao ny anjaran’ny mpianatra. Mahazo misoratra anarana koa ny hafa efa mifanerasera tsy tapaka amin’ny fiangonana, raha manaiky ny fampianaran’ny Baiboly, ary miaina mifanaraka amin’ny fitsipika kristianina.—be 282.
2. Teny Fampidirana: 3 minitra na latsaka. Ny mpitari-draharahan’ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana no hanao azy io, aorian’ny hira sy vavaka. Hataony izay hahatonga ny mpanatrika ho tsindrian-daona amin’ny zavatra hodinihina amin’ilay fivoriana, anisan’izany ilay fanontaniana valiana ao amin’ny Valin’ny Famerenana ho An’ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana.
3. Harena avy ao Amin’ny Tenin’Andriamanitra:
Lahateny: 10 minitra. Omena ao amin’ny Tari-dalana ho An’ny Fiainantsika sy ny Fanompoana ny foto-kevitra sy ny hevi-dehibe roa na telo. Mpanampy amin’ny fanompoana mahay na anti-panahy no hanao azy ity. Raha boky vaovao no vakina amin’ny famakiana Baiboly, dia hisy video fampidirana azy io halefa. Azon’ilay mpandahateny atao ny mampifandray ny hevitra ao amin’ilay video amin’ilay foto-kevitra. Tokony hataony azo antoka anefa hoe voaresaka daholo ny hevi-dehibe ao amin’ilay tari-dalana. Raha ampy ny fotoana, dia tokony hampiasainy koa ireo sary sy hevitra araka ny Soratra Masina natao ho fanampim-panazavana.
Andao Hikaroka Harena Miafina: 8 minitra. Fanontaniana sy valiny ity anjara ity, ary tsy misy teny fampidirana sy teny famaranana. Mpanampy amin’ny fanompoana mahay na anti-panahy no hitarika azy ity. Azony zaraina arakaraka ny zavatra ilain’ny fiangonana eo an-toerana ny fotoana ho an’ireo hevitra efatra. Tokony hapetrany amin’ny mpanatrika anefa ny fanontaniana rehetra. Azony jerena koa raha ilaina vakina daholo, na tsia, ireo andinin-teny voalaza eo amin’ireo fanontaniana roa voalohany. Tsy tokony hihoatra ny 30 segondra ny valin-tenin’ireo mandray anjara.
Famakiana Baiboly: 4 minitra na latsaka. Rahalahy no hanao an’ity anjaran’ny mpianatra ity. Hamaky ny anjara nomena azy ilay mpianatra, nefa tsy hanao teny fampidirana na famaranana. Ny tena ifantohan’ilay mpitari-draharahan’ny fivoriana dia ny hanampy ny mpianatra mba hamaky teny tsy misy diso, hahazo tsara izay vakina, hiteny misosa tsara, hahay hanamafy hevitra, hanovaova feo, hanao fiatoana araka ny tokony ho izy, ary hamaky toy ny miteny andavanandro.
4. Fampiofanana Amin’ny Fanompoana: 15 minitra na latsaka. Natao mba hahafahan’ny rehetra manao fanazaran-tena amin’ny fanompoana sy manatsara ny fahaizany mitory sy mampianatra ity fizarana ity. Tokony hataon’ny mpianatra miorina amin’ireo hevitra azo resahina eo amin’ny pejy voalohany amin’ny Tari-dalana ho An’ny Fiainantsika sy ny Fanompoana, ny anjara momba ny fitoriana sy fiverenana mitsidika. Afaka mifidy ny mpitory hoe hampiseho video na hiresaka momba ny boky sy gazety avy ao amin’ny Fitaovana Fampianarana, na tsy hanao an’ireo. Omena ao amin’ny Tari-dalana ho An’ny Fiainantsika sy ny Fanompoana ny faharetan’ny anjara tsirairay, sy ny toromarika fanampiny amin’ny anjaran’ny mpianatra. Tsy voatery hampiditra fanazavana fanampiny ireo mpianatra mba hamenoana fotoana fotsiny. Raha voaomana tsara ny fampisehoana iray, dia ho vita iray minitra mialoha na latsaka. Raha ilaina, dia azo homena anjaran’ny mpianatra ny anti-panahy.
Video Misy ny Hevitra Azo Resahina: Alefa sy hiaraha-midinika isan-kerinandro ireo video misy ny hevitra azo resahina eny amin’ny fanompoana. Haseho amin’ireo video ireo ny fitoriana, fiverenena mitsidika voalohany, ary fiverenana mitsidika faharoa. Ny mpitari-draharahan’ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana no hanao ity anjara ity.
Fitoriana: Ataon’ny rahalahy na anabavy ity anjaran’ny mpianatra ity. Tokony ho lahy na vavy tahaka azy ihany ny mpanampy azy, na olona anisan’ny fianakaviany. Afaka mipetraka na mitsangana ilay mpianatra sy ny mpanampy azy. Hampiasa fomba fiarahabana mety eo an-toerana ilay mpianatra. Tokony hatao miorina amin’ilay hevitra azo resahina ny resadresaka.
Fiverenana Mitsidika Voalohany: Rahalahy na anabavy no hanao an’ity anjaran’ny mpianatra ity. Tsy tokony ho lehilahy no mpanampy raha vehivavy no mitarika, ary tsy tokony ho vehivavy raha lehilahy no mitarika. (km 5/97 2) Afaka mipetraka izy ireo, na mitsangana. Izay tokony holazaina rehefa miverina mitsidika olona liana tamin’ny fitoriana no hasehon’ilay mpianatra. Tokony hatao miorina amin’ny hevitra azo resahina ao amin’ny Tari-dalana ho An’ny Fiainantsika sy ny Fanompoana ilay resadresaka.
Fiverenana Mitsidika Faharoa: Rahalahy na anabavy no hanao ity anjaran’ny mpianatra ity. Tsy tokony ho lehilahy no mpanampy raha vehivavy no mitarika, ary tsy tokony ho vehivavy raha lehilahy no mitarika. (km 5/97 2) Afaka mipetraka izy ireo, na mitsangana. Izay tokony holazaina rehefa miverina mitsidika olona liana tamin’ny fiverenana mitsidika voalohany no tokony hasehon’ilay mpianatra. Tokony hatao miorina amin’ilay hevitra azo resahina ilay resadresaka.
Fampianarana Baiboly: Rahalahy na anabavy no hanao ity anjaran’ny mpianatra ity. Tsy tokony ho lehilahy no mpanampy raha vehivavy no mitarika, ary tsy tokony ho vehivavy raha lehilahy no mitarika. (km 5/97 2) Afaka mipetraka izy ireo, na mitsangana. Tokony hampiseho ampahany amin’ny fampianarana Baiboly efa mandroso ity anjara ity. Tsy ilaina ny teny fampidirana na teny famaranana, raha tsy hoe anisan’ny lesona asaina ampiharin’ilay mpianatra izany. Tsy voatery hovakina koa ireo fehintsoratra rehetra ao amin’ilay loharanon-kevitra, na dia azo atao ihany aza izany indraindray. Ireo teknika amin’ny fahaiza-mampianatra no tena tokony hasongadina.
Lahateny: Lahateny ho an’ny fiangonana ataon’ny rahalahy iray ity anjaran’ny mpianatra ity.
5. Ny Fiainantsika Kristianina: Ao aorian’ny hira, dia mety hisy anjara iray na roa ny 15 minitra voalohany amin’ity fizarana ity. Natao hanampiana ny mpanatrika hampihatra ny Tenin’Andriamanitra izy ity. Mpanampy amin’ny fanompoana mahay na anti-panahy no tokony hanao azy ity, raha tsy misy fanamarihana manokana. Anti-panahy ihany anefa no tokony hanao ny zavatra ilain’ny fiangonana.
Fianarana Baiboly Ataon’ny Fiangonana: 30 minitra. Anti-panahy mahay no hotendrena hanao azy ity. (Azo ampiasaina anefa ny mpanampy amin’ny fanompoana mahay, raha vitsy ny anti-panahy.) Tokony hodinihin’ny anti-panahy rehetra hoe iza no mahafeno fepetra hitarika Fianarana Baiboly Ataon’ny Fiangonana. Tokony ho afaka hitarika tsara an’ilay fianarana ireo neken’ny anti-panahy rehetra, ka hanaja tsara ny fotoana, hanasongadina an’ireo andinin-teny misy hevi-dehibe, ary hanampy ny rehetra hahita ny fomba hampiharana ny hevitra dinihina. Hahita toro lalana tsara izy ireo, raha mandinika indray ny toromarika momba ny fomba fitarihana ny Fianarana Ny Tilikambo Fiambenana. Tokony ho mpitarika sy mpamaky teny samy hafa no ampiasaina isan-kerinandro, raha mety. Raha miteny ny mpitari-draharahan’ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana fa tokony hohafohezina ny fianarana, dia hijery fomba azo hanaovana izany ilay mpitarika. Mety hifidy ny tsy hamaky fehintsoratra sasany izy.
6. Teny Famaranana: 3 minitra na latsaka. Hamintina hevitra mahasoa avy tamin’ilay fivoriana ny mpitari-draharahan’ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana, anisan’izany ilay fanontaniana sy valiny ao amin’ny Valin’ny Famerenana ho An’ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana. Tokony horesahiny koa ny santionan’ny hevitra hodinihina amin’ny herinandro manaraka. Azony atao, ohatra, ny mametraka fanontaniana iray hovaliana amin’ny fivoriana manaraka. Azony ampahatsiahivina koa ny anaran’ireo mpianatra handray anjara, raha ampy ny fotoana. Raha tsy misy toromarika manokana, dia amin’ny teny famaranana ilay mpitari-draharaha no hanao ireo fampandrenesana, na hamaky izay taratasy tokony hovakina amin’ny fiangonana. Tsy tokony hampandrenesina avy eny amin’ny lampihazo ny fanazavana efa mahazatra toy ny fandaharana momba ny fanompoana na ny fanadiovana, fa tokony hapetaka eny amin’ny tabilao misy ny filazana. Raha tsy ho vita ny hanao fampandrenesana na ny hamaky ireo taratasy tokony hovakina, ao anatin’ny fotoana hanaovana ny teny famaranana, dia tokony hasain’ny mpitari-draharaha hanafohy ny anjarany ireo manana anjara mandritra ny Fiainantsika Kristianina. (Jereo ny fehintsoratra 5 sy 9.) Faranana amin’ny hira sy vavaka ny fivoriana.
7. Miezaha Hahay Hamaky Teny sy Hampianatra: Manomboka ny herinandron’ny 7 Janoary 2019, dia ilay bokikely Miezaha no hampiasain’ilay mpitari-draharahan’ny fivoriana rehefa midera sy manome torohevitra ny mpianatra izy. Misy nomerao ao anaty fononteny eo akaikin’ny anjara tsirairay, ao amin’ny Tari-dalana ho An’ny Fiainantsika sy ny Fanompoana. Manondro ny lesona asaina ampiharin’ny mpianatra tsirairay izy ireny. Isaky ny herinandro voalohany amin’ny volana, dia hanao fiaraha-midinika momba ny lesona iray ao amin’ilay bokikely Miezaha ny mpitari-draharahan’ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana. Ny mpianatra ihany no hanoratra eo amin’ny ilay hoe “Inona ny Ezaka efa Nataoko?”, fa tsy ny mpitari-draharaha.
8. Torohevitra: Manana iray minitra eo ho eo ny mpitari-draharahan’ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana isaky ny vita ny anjara tsirairay ataon’ny mpianatra, mba hanomezana teny fiderana sy torohevitra avy ao amin’ny bokikely Miezaha. Tsy horesahiny ny lesona asaina ampiharin’ilay mpianatra, rehefa mampiditra an’ilay anjara izy. Azony tononina kosa izany rehefa vita ilay anjara ary efa avy nanao teny fiderana mety tsara izy. Tokony hohazavainy hoe nahoana no nety tsara ny nanaovan’ilay mpianatra an’ilay izy, na hohazavainy amin-katsaram-panahy hoe inona no mbola tokony hohatsarain’ilay mpianatra. Afaka miresaka lafin-javatra hafa avy amin’ilay anjara koa izy raha hitany hoe mahasoa an’ilay mpianatra na ny mpanatrika izany. Azony omena torohevitra mitokana, miorina amin’ny bokikely Miezaha na ny boky Sekolin’ny Fanompoana ilay mpianatra, mahakasika an’ilay lesona nasaina nampihariny na lesona hafa. Azony atao aorian’ny fivoriana izany na amin’ny fotoana hafa.—Jereo ny fehintsoratra 13 sy 16 mba hahitana fanazavana fanampiny momba ny andraikitry ny mpiandraikitra ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana, sy ny andraikitry ny mpanome torohevitra mpanampy.
9. Faharetan’ny Anjara: Tsy tokony hihoatra ny fotoana ny anjara rehetra, anisan’izany ny fanamarihan’ny mpitari-draharahan’ny fivoriana. Tokony hatsahatra amin’ny fomba voalanjalanja ny anjaran’ny mpianatra, rehefa tapitra ny fotoana. Raha mihoatra kosa ny fotoana amin’ny anjara hafa amin’ilay fivoriana, dia ny mpanome torohevitra mpanampy no hanome torohevitra mitokana an’ilay manana anjara. Haharitra adiny iray sy 45 minitra ilay fivoriana manontolo, ka tafiditra amin’izany ny hira sy vavaka.
10. Fitsidihan’ny Mpiandraikitra ny Faritra: Tokony hatao araka izay voasoratra ao amin’ny Tari-dalana ho An’ny Fiainantsika sy ny Fanompoana ilay fivoriana, mandritra ny fitsidihan’ny mpiandraikitra ny faritra, afa-tsy ny Fianarana Baiboly Ataon’ny Fiangonana eo amin’ilay fizarana hoe Ny Fiainantsika Kristianina. Ny lahateny maharitra 30 minitra ataon’ny mpiandraikitra ny faritra no hasolo azy io mandritra ilay fitsidihana. Alohan’io lahateny io, ny mpitari-draharahan’ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana no hamintina ny fandaharana vao natao, hiresaka santionan’ny hevitra horesahina amin’ny herinandro manaraka, hanao fampandrenesana sy hamaky izay taratasy tokony hovakina, ary hampiditra ny mpiandraikitra ny faritra. Aorian’ilay lahateny dia hamarana ny fivoriana amin’ny hira iray nofidiny ny mpiandraikitra ny faritra. Tsy tokony hisy kilasy fanampiny amin’ny fitenin’ny fiangonana, mandritra ny fitsidihan’ny mpiandraikitra ny faritra. Mbola afaka manao ny fivoriany kosa ny antoko-mpitory amin’ny fiteny vahiny na tenin’ny tanana, na dia mitsidika ny fiangonana mpiahy azy aza ny mpiandraikitra ny faritra. Tokony hiaraka amin’ilay fiangonana mpiahy azy anefa ilay antoko-mpitory mandritra ny lahateny ataon’ny mpiandraikitra ny faritra.
11. Herinandron’ny Fivoriambe: Tsy hisy fivoriana amin’ny herinandron’ny fivoriamben’ny faritra na vondrom-paritra. Tokony hianaran’ny tsirairay na ny fianakaviana ny zavatra tokony hianarana amin’io.
12. Herinandron’ny Fahatsiarovana: Tsy hisy ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana raha amin’ny andavanandro ny andron’ny Fahatsiarovana. Mazava ho azy, fa tokony hisy fivoriana alohan’ny fanompoana amin’ny andron’ny Fahatsiarovana.
13. Mpiandraikitra ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana: Anti-panahy iray nofidin’ny anti-panahy rehetra no ho mpiandraikitra ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana. Ataony azo antoka hoe voalamina tsara io fivoriana io, hijery koa izy raha narahina tsara ireo toromarika voalaza tato. Tokony hifampiresaka tsara amin’ny mpanome torohevitra mpanampy izy. Tokony halaminy avy hatrany ny anjaran’ny mpianatra, raha vao voarainy ny Tari-dalana ho An’ny Fiainantsika sy ny Fanompoana amin’ny volana iray. (Jereo ny fehintsoratra 4.) Tokony hozaraina telo herinandro mialoha, fara fahatarany, ny anjaran’ny mpianatra tsirairay, ka ny taratasy Anjara Amin’ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana (S-89) no ampiasainy.
14. Mpitari-draharahan’ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana: Anti-panahy iray no hitari-draharaha mandritra ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana isan-kerinandro. (Azo tendrena ho mpitari-draharaha ny mpanampy amin’ny fanompoana mahay, raha ilaina, ary raha vitsy ny anti-panahy eo anivon’ny fiangonana.) Izy no manao ny teny fampidirana sy famaranana. Izy koa no mitarika ny fiaraha-midinika an’ireo video misy ny hevitra azo resahina, na ny video fampidirana ny lesona avy ao amin’ny bokikely Miezaha. Izy koa no mampiditra ny anjara rehetra, sady mety mbola hanao anjara hafa, raha vitsy ny anti-panahy. Tokony ho tena fohy ny fanamarihana ataony eo anelanelan’ny anjara tsirairay. Ny anti-panahy rehetra no hanapaka hoe iza avy ny anti-panahy mahafeno fepetra ho mpitari-draharaha. Hifandimby hitarika an’ilay fivoriana ireo anti-panahy mahafeno fepetra ireo isan-kerinandro. Afaka mitari-draharaha matetika kokoa noho ny anti-panahy hafa rehetra nekena anefa ny mpiandraikitra ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana, arakaraka ny zava-misy eo an-toerana. Raha mahafeno fepetra hitarika Fianarana Baiboly ny anti-panahy iray, dia mahafeno fepetra ho mpitari-draharahan’ny fivoriana koa. Tadidio anefa fa ny hanao teny fiderana avy amin’ny fo sy hanome torohevitra amim-pitiavana an’ireo mpianatra no andrasana amin’ilay mpitari-draharaha. Izy koa no manao izay hahazoana antoka fa ho vita ara-potoana ilay fivoriana. (Jereo ny fehintsoratra 6 sy 9.) Azon’ilay mpitari-draharaha atao ny mampiasa mikrô misy tongony eo amin’ny sisin’ny sehatra, raha antonona an’ilay izy eo. Ho afaka hankeo amin’ny lampihazo avy hatrany amin’izay ilay rahalahy hanao ny anjarany, rehefa mampiditra an’ilay rahalahy izy. Azo asiana seza sy latabatra koa eo amin’ny lampihazo ka eo ilay mpitari-draharaha no hipetraka mandritra ny anjara famakiana Baiboly sy ilay fizarana hoe Fampiofanana Amin’ny Fanompoana. Mitsitsy fotoana izany.
15. Anti-panahy Mpandrindra: Ny anti-panahy mpandrindra no manendry ny anjara rehetra amin’ny fivoriana, ankoatra ny anjaran’ny mpianatra. Anisan’izany ny fanendrena ny mpitari-draharahan’ilay fivoriana isan-kerinandro, ka izay efa neken’ny anti-panahy rehetra hanao izany no ho tendreny. Hiara-miasa tsara amin’ny mpiandraikitra ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana izy, ka tokony hapetany eo amin’ny tabilao misy ny filazana ny lisitr’ireo rehetra manana anjara amin’ilay fivoriana manontolo.
16. Mpanome Torohevitra Mpanampy: Tena tsara raha anti-panahy mahay mandaha-teny no miantsoroka an’ity andraikitra ity. Izy mantsy no hanome torohevitra mitokana ny anti-panahy sy mpanampy amin’ny fanompoana, mahakasika ny anjaran’izy ireo, anisan’izany ny anjara amin’ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana, lahateny ho an’ny besinimaro, fitarihana na famakian-teny amin’ny Fianarana Ny Tilikambo Fiambenana na Fianarana Baiboly Ataon’ny Fiangonana. (Jereo ny fehintsoratra 9.) Raha maro ny anti-panahy mahay mandaha-teny sy mampianatra, dia azo soloana isan-taona ny mpanome torohevitra mpanampy. Tsy voatery hanome torohevitra foana izy, isaky ny avy nanao anjara ireo rahalahy.
17. Kilasy Fanampiny: Azo atao ny manisy kilasy fanampiny raha maro ny mpianatra. Tokony hisy mpanome torohevitra mahay hitarika azy io, ary tsara kokoa izany raha anti-panahy. Azo tendrena koa anefa ny mpanampy amin’ny fanompoana tena mahay, raha ilaina izany. Ny anti-panahy rehetra no hanapaka hoe iza no hitarika azy io, sy hoe tokony hifandimbiasana ve ilay izy sa tsia. Ny fomba fiasa resahin’ny fehintsoratra 8 no tokony harahin’ilay mpanome torohevitra. Raha misy kilasy fanampiny, dia asaina ho any amin’ny efitra fanampiny ireo mpianatra, aorian’ilay hoe Andao Hikaroka Harena Miafina, mandritra ilay hoe Harena avy ao Amin’ny Tenin’Andriamanitra. Miverina ao amin’ny efitrano lehibe izy ireo aorian’ilay fizarana hoe Fampiofanana Amin’ny Fanompoana. Raha misy video sy fiaraha-midinika ilay anjara, dia avy ao amin’ilay efitra hanaovana ny kilasy fanampiny ihany ny mpianatra no hijery na hihaino azy, raha mety. Raha tsy izany, dia hampiasa fitaovana enti-tanana ilay mpanome torohevitra mba hampisehoana ilay video sy hitarihana ilay fiaraha-midinika.
18. Video: Hisy video hampiasaina amin’ity fivoriana ity. Azo alaina amin’ny alalan’ny programa JW Library ireny video ireny, ary azo ampiasaina amin’ny fitaovana elektronika isan-karazany. Azo alefa any amin’ny fivoriana alohan’ny fanompoana indraindray ny video misy ny hevitra azo resahina, rehefa avy nalefa tamin’ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika sy ny Fanompoana.
Soratra Fandikana boky Toromarika Mahakasika ny Fivoriana Momba ny Fiainantsika Kristianina sy ny Fanompoana